Pre-Alloyed Powder ထုတ်လုပ်သူများ - China Pre-Alloyed Powder Factory & Suppliers
FCZ925 ခဲသတ္တုပါးဖြတ်တောက်ခြင်းဓါးသွားအတွက်အသုံးပြုသတ္တုအမှုန့်နှုန်း FCZ925
FCZ925 Granit Muti ဖြတ်တောက်ခြင်းဓါးသွားအတွက်အသုံးပြုသောသတ္တုအမှုန့်များ ၁။ Pre-alloyed Powder ဆိုတာဘာလဲ Pre-alloyed မှုန့်များသည်ပိုမိုခက်ခဲပြီးဖိအား နည်း၍ မြင့်မားသောသိပ်သည်းသော compacts များထုတ်လုပ်ရန်ပိုမိုမြင့်မားသောဖိအားပေးသည့်ဝန်များလိုအပ်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်မြင့်မားသောစွမ်းအင်ရောနှောထားသောပစ္စည်းများထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ဒြပ်စင်အမှုန့်များမှတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများထုတ်လုပ်မှုသည်အလွန်မြင့်မားသောအပူချိန်နှင့်ကြာရှည်ခံသောအချိန်တို့ကိုလိုအပ်သောအခါကြိုတင်သတ္တုစပ်ခြင်းကိုလည်းအသုံးပြုသည်။ အကောင်းဆုံးဥပမာများမှာသံမဏိများဖြစ်သည်။
ကြွေထည်စိန်ဓါးသွားအတွက် FCNS03 Fe Cu Ni Sn Pre Alloyed Powder
ကြွေထည်စိန်ဓါးသွားအတွက် FCNS03 Fe Cu Ni Sn Pre-Alloyed Powder ၁။ သံမဏိအမှုန့်များရောစပ်ထားသောအမှုန့်များသည်ပိုမိုခဲယဉ်း။ ဖိအားနည်းပြီးမြင့်မားသောသိပ်သည်းသော Compact များကိုထုတ်လုပ်ရန်ပိုမိုမြင့်မားသောဖိအားပေးသည့်ဝန်များလိုအပ်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်မြင့်မားသောစွမ်းအင်ရောနှောထားသောပစ္စည်းများထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ဒြပ်စင်အမှုန့်များမှတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများထုတ်လုပ်မှုသည်အလွန်မြင့်မားသောအပူချိန်နှင့်ကြာရှည်ခံသောအချိန်တို့ကိုလိုအပ်သောအခါကြိုတင်သတ္တုစပ်ခြင်းကိုလည်းအသုံးပြုသည်။ အကောင်းဆုံးဥပမာများမှာသံမဏိများဖြစ်ပြီး ...
စိန်ကိရိယာများအတွက် FCNS77 Fe Cu နီ Sn အခြေခံကျသော Alloyed Powder
FCNS77 Fe Cu Ni Sn စိန်ကိရိယာများအတွက်အခြေခံကြိုတင် Alloyed Powder ၁။ ကြိုတင်ရောစပ်ထားသောအမှုန့်များသည် Pre-alloyed powders များသည်ပိုမိုခက်ခဲသည်၊ compressable နည်းပြီးမြင့်မားသောသိပ်သည်းသော compacts များကိုထုတ်လုပ်ရန်ပိုမိုမြင့်မားသောဖိအားပေးသည့်ဝန်များလိုအပ်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်မြင့်မားသောစွမ်းအင်ရောနှောထားသောပစ္စည်းများထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ဒြပ်စင်အမှုန့်များမှတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများထုတ်လုပ်မှုသည်အလွန်မြင့်မားသောအပူချိန်နှင့်ကြာရှည်ခံသောအချိန်တို့ကိုလိုအပ်သောအခါကြိုတင်သတ္တုစပ်ခြင်းကိုလည်းအသုံးပြုသည်။ အကောင်းဆုံးဥပမာများမှာသံမဏိများဖြစ်သည်။
ကြေးနီ Alloy အမှုန့် Cu / Sn 8515 ကြေး Pre- alloyed Spherical Shape
Copper Alloy Powders (Cu / SN) Bronze (Pre- Alloyed) - ယုံကြည်စိတ်ချရသောကုန်သည်များမှရရှိသောအရည်အသွေးမြင့်ကုန်ကြမ်းများကိုအသုံးပြုပြီး Sherical shape အမှုန့်ကိုထုတ်လုပ်သည်။ အမှုန်များသည်ပြီးပြည့်စုံသောနယ်ပယ်များဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုလျှပ်စစ်ဆိုင်ရာအသုံးချမှုများ၊ ငါးပိများ၊ အီလက်ထရောနစ်သုံးပစ္စည်းများ၊ ပွတ်တိုက်ပစ္စည်းများနှင့်စိန်သုံးကိရိယာများတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။ ထို့အပြင်၎င်းကိုပုံမှန်နှုန်းထားဖြင့်တင်ပြသည်။ Fe-Cu Prealloyed Powder သည်စိန်ထုတ်လုပ်မှုအမျိုးမျိုးအတွက်အသုံးပြုသောမရှိမဖြစ်အမှုန့်ဖြစ်ပြီးနှောင်ကြိုးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပါသည်။
အရည်အသွေးမြင့်စကျင်ကျောက် Blade အတွက် CCS25 FeCuSn Pre-Alloyed Powder
CCS25 pre-alloy သတ္တုအမှုန့်ကဘာလဲ? CCS25 သည် Cu, Co, Sn ဖြစ်ပြီးအရည်အသွေးကောင်းမွန်သောစကျင်ကျောက်ဖြတ်တောက်ခြင်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိသောစိန်နှင့်စိုစွတ်အောင်စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်ပြီးကောင်းမွန်သော၊ မညီညွတ်သောနှင့်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားသည့်အရောအနှောရောနှောထားသောအမှုန့်များပါဝင်သည်။ ၂။ CSS25 အမှုန့်၏အဓိကအချက်များ Cu, Co, Sn သီအိုရီသိပ်သည်းဆ 8.29g / cm³ Sintering အပူချိန် 760 ℃အိပ်ရာအစွမ်းသတ္တိ 800 MPa မာကြောခြင်း 85-95HRB 3. လျှောက်လွှာညွှန်ကြားချက်များ - စကျင်ကျောက် sailing ...
အလယ်အလတ်အဆင့်မှအရည်အသွေးမြင့်စိန်သုံးကိရိယာများအတွက် FCCS07 FeCuCoSn Pre-Alloyed Metal Powde
FCCS07 FeCuCoSn Pre-Alloy Metal Powde မှအလတ်စားမှအရည်အသွေးမြင့်စိန်ပစ္စည်းများအတွက် ၁။ ကြိုတင်ရောစပ်ထားသောအမှုန့်သည်အဘယ့်ကြောင့်ရောစပ်ထားသနည်း။ ပိုမိုရှုပ်ထွေး။ ဖိအား နည်း၍ မြင့်မားသောသိပ်သည်းမှုဆိုင်ရာ compacts များကိုထုတ်လုပ်ရန်ပိုမိုမြင့်မားသောဖိအားပေးသည့်ဝန်များလိုအပ်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်မြင့်မားသောစွမ်းအင်ရောနှောထားသောပစ္စည်းများထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ဒြပ်စင်အမှုန့်များမှတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများထုတ်လုပ်မှုသည်အလွန်မြင့်မားသောအပူချိန်နှင့်ကြာရှည်ခံသောအချိန်တို့ကိုလိုအပ်သောအခါကြိုတင်သတ္တုစပ်ခြင်းကိုလည်းအသုံးပြုသည်။ အကောင်းဆုံးနမူနာများမှာသံမဏိများဖြစ်သည်။
အရည်အသွေးမြင့်စိန်ကိရိယာများအတွက် FCC58 FeCoCu အကြိုသတ္တုမှုန့်
အရည်အသွေးမြင့်စိန်ပစ္စည်းများအတွက် FCC58 FeCoCu သံမဏိအမှုန့် ၁။ ကြိုတင်ရောစပ်ထားသောအမှုန့်သည်အများအားဖြင့်ပိုမိုခက်ခဲသည်၊ ဖိသိပ်သည်းမှုနည်းပြီးမြင့်မားသောသိပ်သည်းမှုဆိုင်ရာ compacts များထုတ်လုပ်ရန်ပိုမိုမြင့်မားသောဖိအားပေးသည့်ဝန်များလိုအပ်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်မြင့်မားသောစွမ်းအင်ရောနှောထားသောပစ္စည်းများထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ဒြပ်စင်အမှုန့်များမှတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများထုတ်လုပ်မှုသည်အလွန်မြင့်မားသောအပူချိန်နှင့်ကြာရှည်ခံသောအချိန်တို့ကိုလိုအပ်သောအခါကြိုတင်သတ္တုစပ်ခြင်းကိုလည်းအသုံးပြုသည်။ အကောင်းဆုံးဥပမာများမှာသံမဏိများဖြစ်သည်။
FCP321 အလတ်စားအချင်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော Granade Saw Blade အတွက်ကြိုတင်ရောစပ်ထားသောအမှုန့် ၁ သည် Pre-alloy လုပ်ထားသောအမှုန့်များသည်ပိုမိုခဲယဉ်း။ ဖိအား နည်း၍ မြင့်မားသောသိပ်သည်းသော compacts များကိုထုတ်လုပ်ရန်ပိုမိုမြင့်မားသောဖိအားပေးသည့်ဝန်များလိုအပ်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်မြင့်မားသောစွမ်းအင်ရောနှောထားသောပစ္စည်းများထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ဒြပ်စင်အမှုန့်များမှတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများထုတ်လုပ်မှုသည်အလွန်မြင့်မားသောအပူချိန်နှင့်ကြာရှည်ခံသောအချိန်တို့ကိုလိုအပ်သောအခါကြိုတင်သတ္တုစပ်ခြင်းကိုလည်းအသုံးပြုသည်။ အကောင်းဆုံးဥပမာများမှာသံမဏိများဖြစ်ပြီး ...
CCS25 Cu Co Sn အရည်အသွေးမြင့်မားသောစကျင်ကျောက်သစ် Blade များအတွက်ကြိုတင်ရောစပ်ထားသောအမှုန့်
CCS25 Cu Co Sn အရည်အသွေးမြင့်မားသော Marble Saw Blade အတွက် Prealloyed Powder ၁။ သံမဏိအမှုန့်များရောစပ်ထားသော Pre-alloyed မှုန့်များသည်ပိုမိုခက်ခဲသည်၊ compressible နည်းပြီးမြင့်မားသောသိပ်သည်းသော compacts များကိုထုတ်လုပ်ရန်ပိုမိုမြင့်မားသောဖိအားပေးသည့်ဝန်များလိုအပ်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်မြင့်မားသောစွမ်းအင်ရောနှောထားသောပစ္စည်းများထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ဒြပ်စင်အမှုန့်များမှတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများထုတ်လုပ်မှုသည်အလွန်မြင့်မားသောအပူချိန်နှင့်ကြာရှည်ခံသောအချိန်တို့ကိုလိုအပ်သောအခါကြိုတင်သတ္တုစပ်ခြင်းကိုလည်းအသုံးပြုသည်။ အကောင်းဆုံးဥပမာများမှာသံမဏိများဖြစ်သည်။
ကြွေကြွေပြားများအတွက် FCNS06 Fe Cu နီ Sn ကြိုတင် Alloyed Powder
FCNS06 ကြွေထည်လှီးခြင်းဘီးအတွက် FC Cu06 Fe Cu နီ Sn သံမဏိမှုန့်မှုန့် 1. Pre-alloyed Powder ဆိုသည်မှာ Pre-alloyed powders များသည်ပိုမိုခက်ခဲသည်၊ compressable နည်းပြီးမြင့်မားသောသိပ်သည်းသော compacts များကိုထုတ်လုပ်ရန်ပိုမိုမြင့်မားသောဖိအားပေးသည့်ဝန်များလိုအပ်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်မြင့်မားသောစွမ်းအင်ရောနှောထားသောပစ္စည်းများထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ဒြပ်စင်အမှုန့်များမှတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများထုတ်လုပ်မှုသည်အလွန်မြင့်မားသောအပူချိန်နှင့်ကြာရှည်ခံသောအချိန်တို့ကိုလိုအပ်သောအခါကြိုတင်သတ္တုစပ်ခြင်းကိုလည်းအသုံးပြုသည်။ အကောင်းဆုံးဥပမာများမှာသံမဏိများဖြစ်ပြီး ...